Vovony Parabolan vovo-bolo (23454-33-3) Mpanao sy mpamatsy - Orinasa
Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) vovoka no anarana sy anarana momba ny anabolisy anabolin'ny Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate, matetika sy tsy mitonona anarana hoe Tren Hex na Trenbolone Hex. Antsoina hoe steroide anabolic ampiasaina amin'ny fampiasana atleta sy bodybuilder ankehitriny izy io.
Rul Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) vovoka (23454-33-3) video
Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) poids (23454-33-3) Description
Ny Rohbol Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) dia ny hormona proteinina ary ny tsara indrindra amin'ny anabolika, afaka hampiroborobo ny proteinina ary koa ny famolavolana ny balan'ny positive nitrogen. Io dia hita fa fitaovana tena tsara ho an'ny fampiroboroboana ny habeny sy ny tanjaka eo anatrehan'ny proteinina sy kaloria mahasoa, mampiroborobo ny fambolena fanorenana ny vatan'ny olona ary afaka manova ny catabolism.has dia manjavona amin'ny steroid anabolika amin'ny fampiasana bodybuilding sy ny atletisma. Ny ankamaroany dia fantatra amin'ny hoe fanafody mampangotra-menaka, ary tena malaza amin'ny atleta noho ny fahaizany mampiroborobo ny fananganana haingana ny tanjaka, ny haben'ny muscle, ary ny famaritana.
Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan), ny halavan'aretin'ny steroide ester dia miankina indrindra amin'ny tahan'ny fahazahoana matavy amin'ny rano maloto: w the long chain the ester, the higher this ratio, and the longer the half life. Ity carbone manokana ity dia azo ampitahaina indrindra amin'ny esterhate ester; Ny antsasaky ny fiainana angamba dia kely noho ny herinandro.
Rohan Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) poids (23454-33-3) Specifications
Product Name Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) poids (23454-33-3)
Anarana simika cyclohexylmethyl 17-beta-hydroxyestra-4,9,11-Trien -3-iray carbonate; ESTRA-4,9,11-TRIEN-3-iray; Estra-4,9,11-trien-3-iray, 17b-hydroxy-, cyclohexylmethylcarbonat (8CI); 4-CDC
molekiolan'ny Formula C26H34O4
molekiolan'ny Wvalo 410.55
mitsonika Point 90-95 °
mangotraka Point 607.9 ° C
Color poety kristaly mavo
Application Azo ampiasaina ho fitaovana fanafody, hormone steroid, Anabolin. Amin'ny maha-hormonina lahy sy hormones anabolika.
Inona ny Rohaw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (parabolan) (poizina 23454-33-3)?
Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate, or trenbolone cyclohexylmethylcarbonate, sold under the brand name Parabolan and Hexabolan, is a synthetic, injected anabolic-androgenic steroid (AAS) of the group of nandrolone and an ester of esters - specifically, the hexahydrobenzylcarbonate (cyclohexylmethylcarbonate) ester of trenbolone.
Row Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate poids dia ny protein assimilation hormonal sy ny anabolic tsara indrindra, afaka hampiroborobo ny proteinina ary koa ny famoronana ny balan'ny azota positive. Efa hita fa vokatra tsara ho an'ny fampiroboroboana ny habeny sy ny tanjaka eo amin'ny fisian'ny proteinina sy calorie ampy izany, mampiroborobo ny fizotran'ny fanorenana vatosoa ary afaka manova ny catabolism.has dia lasa tsy miraharaha ny steroid amin'ny fampiasana bodybuilding sy ny atletisma. Ny ankamaroany dia fantatra amin'ny hoe fanafody mampangotra-menaka, ary tena malaza amin'ny atleta noho ny fahaizany mampiroborobo ny fananganana haingana ny tanjaka, ny haben'ny muscle, ary ny famaritana.
Ahoana ny fampiasana vovon-tsolotsaina Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) ho an'ny Parabolan (23454-33-3) tsingerin'ny
Parabolan ohatra mpihazakazaka fanadinana (famantaranandro mandritra ny herinandro 12)
- Testosterone Cypionate amin'ny 500mg / herinandro
- Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) amin'ny 228mg / herinandro
Ny fihoaram-pefy Parabolan toy izany dia fanombohana fotsiny hoan'ireo mpampiasa steroide anabolic izay tonga amin'ny fampiasana an'i Parabolan. Ny Testosterone Cypionate, izay variana lava ny Testosterone amin'ny doka 500mg / herinandro lava dia matetika mifampizara miaraka amin'i Parabolan noho ny fifanarahana tsy misy fotony. Samy manana ny antsasaky ny fiainany sy ny tahan'ny fanafahana izy ireo. Ity Cycle Parabolan fanombohana ity dia azo sokajiana ho toy ny volkano na volombava miverimberina noho ireo doses ampiasaina.
Ohatra fampiasa andavanandro amin'ny parabolan (mandritra ny fe-potoam-piofanana 14 herinandro)
- Testosterone Enanthate amin'ny 100mg / herinandro
- Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) amin'ny 350mg / herinandro
- Equipoise (Boldenone Undecylenate) amin'ny 400mg / herinandro
Herinandro 1 - 6:
- Dianabol (Methandrostenolone) amin'ny 25mg / andro
Io fihodinan'ny parabolana afovoany io dia azo sokajiana ho toy ny fandaniana hafa na ny famarotana masomboly, ary mampifangaro steroids telo anabolic mitovy amin'ny famotsorana azy sy ny antsasaky ny fiainana. Ny testosterone Enanthate dia ampiasaina ao amin'ny dingan'ny TRN / 100mg / herinandro, raha mampiasa Equipoise amin'ny 400mg / herinandro. Tokony hiteraka fiantraikany ratsy eo amin'ny aromazina ity fiakarana ity, ankoatra ny mety hisian'ny Dianabol. Dianabol dia ampidirina amin'ny fiantombohan'ny diany ary mihazakazaka hatramin'ny herinandro 6 mba hanombohana ny fiatoana. Ny fanombohana dia ny ezaka handrindrana ny firaisana (matetika ny steroid anabolic) izay hahatratra ny haavon'ny ranon-dra amin'ny haavo mandritra ny herinandro vitsivitsy voalohany raha toa ka mampiroborobo tsikelikely ao anatin'ny rafitry ny mpampiasa ny fifandimbiasana efa ela. Ny fampiasana ny fitambaran-kitonkom-poko dia natao mba ahafahan'ny mpampiasa mahazo tombony mandritra ireo herinandro maromaro voalohany raha toa ka tsy hiaina fiovana haingana avy amin'ny vondrona efa ela izy ireo.
Fiaramanidina Parabolan nandroso
Ohatra fampiasa andavanandro amin'ny parabolan (mandritra ny fe-potoam-piofanana 12 herinandro)
- Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) amin'ny 500mg / herinandro
- Primobolan (Methenolone Enanthate) amin'ny 1,000mg / herinandro
- Oral Winstrol (Stanozolol) amin'ny 50mg / andro
Io fihodinan'ny parabolan io dia mora sokajiana ho toy ny pre-fifaninanana na famokarana fivoahana izay misy ny fatiantoka matavy na ny tazo mena (miaraka amin'ny tavy na ny tahiry / ny fihazonana azo atao). Mbola ampiasaina ihany koa ireo fitambarana mitovitovy amin'ny halavan'ny androm-piainana. Ny Testosterone Enanthate dia miverina amin'ny toeran'ny mpanohana ny TRT indray. Ny Primobolan, izay tiany indrindra amin'ny mpanao fanatanjahan-tena fifaninanana (indrindra ho an'ny pre-fifaninanana) dia ampiasaina ary ny tombontsoa azo avy amin'ny dosie avo dia hanampy amin'ny fanatontosana ny fijery sarotra sy goavam-be, indrindra rehefa ampiasaina i Parabolan. Ny fampiasana an'i Winstrol (endrika am-bava) dia tsy ho an'ny tanjon'ny kely fanombohana ihany, fa koa hanampiana ny mpampiasa amin'ny fanatontosana tara matevina, mandoaka ary sarotra amin'ny fikarakarana.
Rombo Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) poids (23454-33-3) Dosage
Parabolan dia steroide anabolic izay mitondra tanjaka mifantoka izay tsy manan-tsahala. Ny ampolon'ny Parabolan dia mitondra 76mg isaky ny milliliter. Ity dia manome anao 50mg an'ny Trenbolone active ampolompo. Tao amin'ny toerana iray fitsaboana, Parabolan dia matetika no nitantana ny fotoana 3 isam-bolana na iray ampolony amin'ny andro 10. Ho an'ny tanjona amin'ny fampivoarana ny fampiroboroboana, ny ampamoaka 3-4 isan-kerinandro dia tena mahazatra ary tokony hamokatra vokatra manan-danja. Azonao atao ny manandrana avo dia avo, angamba 5-6 ampela isan-kerinandro ary tsy mahazatra izany. Na izany aza, maro ireo no hahita 3-4 isan-kerinandro ho azy ireo izay ilainy.
Na inona na inona ny famoahana tanteraka, dia ny faharetan'ny 8-10 herinandro fampiasana. Tsy midika izany fa ny fe-potoam-piofanana momba ny steroide anabolic dia herinandro 8-10 fa mampiseho ny ampahany parabolan amin'ilay drafitra. Ny Parabolan koa dia hiorina tsara amin'ny ankamaroan'ny steroide anabolic. Fidio izay steroïd izay mifanentana indrindra amin'ny filànao manokana. Ny drafitra toy izany dia mety ahitana ny Masteron sy Winstrol mandritra ny fizotran'ny fizarana miaraka amin'ny testosteron ampy. Ao anatin'ilay dingana lehibe dia betsaka ny testosterone dia hiasa mifanaraka amin'ny Trenbolone miaraka amin'ny mety ho fanampiny Anadrol na Dianabol.
Rao Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) poids (23454-33-3) Benefits
Parabolan dia steroid anabolic potentium izay manana tombony maro. Ampiasaina amin'ny atleta, mpandidy, ary ny olon-kafa izay mikaroka na manapaka ny lanjany ary mampitombo ny fiaretany. Ny anarany siantifika dia Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate. Ny steroid dia fomba mahery kokoa noho ny steroid hafa androgenic sy anabolic eo amin'ny tsena ary tsy azo ampitahaina amin'ny testosteron natsangana voajanahary.
Parabolan dia tena maro be ary manana tombony goavana raha manaraka ny torolàlana ampiasaina amin'ny farany. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny fanorenana hozatra ary izany dia noho ny faharetan'ny azota hitazonana azy, izay mitarika ho amin'ny fampitomboana ny famarotana proteinina. Ny proteinina dia ny tranoben'ny hozatra ary noho izany, ny fampiroboroboana ny fampiasana proteinina dia hitarika ho amin'ny fambolena. Mampitombo ihany koa ny isan'ny sela mena ary ny sela mena dia tompon'andraikitra amin'ny fitaterana oksizenina ho an'ny hozatra sy ny vatan'ny olona manodidina azy, izany dia manampy amin'ny fananana fiaretana. Noho izany, tsy ho reraka haingana ianao rehefa miezaka na manao asa hafa mafy. Tena mahasoa ho an'ny atleta sy ny bikabikan-tsolika. Parabolan ihany koa dia manampy ny vatan'ny olona ho sitrana haingana aorian'ny asa an-terivozona na aorian'ny ratra.
Tsy toy ny steroids anabolic hafa, mampitombo ny fatran'ny vatan'ny parabolan ny Parabolan ary manampy amin'ny fihenan'ny lanjany. Ny steroid dia manakana ny asan'ny hormones izay miteraka tombom-barotra amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fiovan'ny sugara amin'ny tavy fa tsy manapaka azy. Manatsara ny fahombiazan'ny sakafo ihany koa izy io, izay ahafahan'ny vatana mandray ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny sakafo mahavelona amin'ny sakafo.
Buy Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (parabolan) powder avy amin'ny Buyaas.com